HARGEYSA: Booliska Somaliland oo irdaha u laabay xarunta taleefishinka Universal - Calanka.com
Ciidanka booliska Somaliland ee magaalada Hargeysa ayaa albaabada u laabay xarunta uu telefishinka Universal ku leeyahay magaalada Hargeysa, sida uu maamulka TV-gaasi u sheegay warbaahinta.
Agaasimaha Universal ee Hargeysa, Maxamed Caabi Digaale, ayaa sheegay in askar boolis ah ay u yimaadeen xilli ay ku guda jireen warkii duhurnimo, isla markaana ay shaqaalihii ka saareen xarunta.
“Waxay yiraahdeen waxaa na soo diray wasaaradda warfaafinta ee Somaliland, oo tiri ruqsadii baa lagala noqday TV-gaas, laga billaabo saacaddaasi TV-ga wax shaqo ah ma qaban karo, sidii baa albaabada loogu laabay, shaqaalahana looga dareeriyay,” ayuu yiri Caabi.
Agaasimaha ayaa sheegay in walow aan loo keenin warqad maxkamadeed oo cadeyneysa dacwadda loo haysata, hadana uu tuhunsan yahay in xarunta looga xiray xafladdii 26-ka June oo uu sheegay inay isku mar tebinayeen munaasabadihii ka socday Hargeysa iyo Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta ee Somaliland, Suleymaan Yuusuf Koore, oo aan wax ka weydiinay sababta loo xiray xarunta telefishinka Universal ee Hargeysa ayaa sheegay in TV-ga uu diiday baahinta khudbaddii madaxweyne Muuse Biixi ee habeenkii 26-ka June.
Mar aan weydiinnay waxa ay u tixgelin waayeen farqiga u dhexeeya warbaahinta dowladda iyo tan gaarka loo leeyahay, ayaa wasiir Koore waxa uu ku jawaabay:
“Marka ay joogto maalmaha qaranka, cid kasta ama private ha noqoto ama public ha noqoto xafladahaasi qaran ee ka socda deegaannada uu ka hawlagalayo [waa in laga qeyb qaati], hawada uu ku shaqeysto iyo dhulka uu ku shaqeysto iyo meesha uu faa’iidada ka helayo waa Somaliland,”
Waxa uu intaa ku daray in sababta ugu weyn ee ay telefishinkaasi u xireen ay tahay inuu xurmeyn waayay maalintaasi ay xornimada qaateen gobolladii Waqooyi ee haatan ah Somaliland.
“Maalmuhu waa 365 maalmood sanadkii, haddii intaa oo dhan uu dalka kaga shaqeysanayo oo dhammaan shirkadihii xayeysiiska kaga qaadanayo, saddex maalmood oo ah maalmaha qaranka inuu baahiyo hadduu diido, anaguna 362-da maalmood oo kale ayaan u diideynaa,” ayuu yiri Suleymaan Yuusuf Koore.
Booliska Somaliland ayaa sidoo kale maalin ka hor albaabada u laabay xarunta telefishinka Star ee Hargeysa.
Dowladda oo amartay in afar qof laga sii daayo xarunta karantiilka coronavirus ee Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir oo faah-faahin ka bixiyay qarax ka dhacay Muqdisho
SAWIRRO: Madaxweye Deni oo u kuur-galay xaaladda magaalada Qardho oo daad qaaday